पाँच महिनादेखि किन बस्न सकेन लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक ? | Nepal Ghatana
पाँच महिनादेखि किन बस्न सकेन लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक ?
प्रकाशित : ८ चैत्र २०७८, मंगलवार ०९:०९
मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि एमालेले संसद निरन्तर अवरुद्ध गर्दै आएको छ । नवौं अधिवेशनमा बाह्रवटा बैठक बस्यो । सबै बैठकमा एमालेले अवरोध गरेको थियो । प्रदेश सरकारले पनि संसदलाई दिने बिजनेश तयार गर्न सकेको छैन ।
एमालेले प्रतिनिधि सभामा जस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि आफूले कारबाही गरेका सांसदलाई पदमुक्त नगरेसम्म संसद चल्न नदिने अडान राखेको छ ।
एमालेले प्रदेश सभा सदस्य अजय शाही र विमला वलीलाई पदमुक्त गरेको सूचना संसदबाट आउनु पर्ने माग गरिरहेको छ । तर दुई सांसदको कारबाहीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधिन छ । सरकारले संसद चलाउने वातावरण बनाउनुको त परको कुरा आफूहरुसँग संवाद नै नगरेको आरोप लगाएको छ ।
सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको टकराबका कारण संसद बन्दक बनेको छ । सरकारले संसद खुलाउन नसक्नु र प्रतिपक्षले आफ्ना माग राखेर संसदलाई निरन्तर अवरोध गर्दै जाँदा प्रदेशलाई चाहिने कानून निर्माण हुन सकेको छैन ।जनताको आवाज लामो समयदेखि संसदमा उठ्न सकेको छैन ।
संसद स्थगित भएको ६ महिना भित्र संसद बैठक आह्वान गर्नु पर्ने संबैधानिक ब्यवस्था छ । अहिलेसम्म लुम्बिनी प्रदेश सभामा ७४ वटा विधेक दर्ता भएको मध्ये ६७ वटा प्रमाणिकरण भइसकेको छ । २ वटा विधेयक बिचाराधिन र एउटा प्रदेशसभामा पेश हुन बाँकी छ । सरकारले प्रदेश प्रहरीसम्बन्धि विधेक र सञ्चार सम्बन्धि विधेक संसदमा लैजाने तयारी गरेको छ ।